Sei kusarudza mafomu kuti negadziriro yeparutivi muna iCloud | IPhone nhau
Maitiro ekusarudza manyore kuti ndeapi maapplication anogona kutsigirwa kuICloud
Kana iwe wakasarudza kushandisa iCloud kutsigira yako iOS chishandiso Munguva yekumisikidza kwavo kwekutanga, ipapo mazhinji maapps aunoseta anozove nechengetedzo yavo yekumisikidza otomatiki muICloud. Izvi zvinogona kubatsira zvakanyanya kana ukadzoreredza yako iPhone kana iPad kubva kune backup, nekuti haufanire kugadzirisa zvese zvido zvekushandisa zvakare.
Asi ko kana iwe usiri kuda mamwe maapplication kutsigirwa kuICloud? Semagumo, zviri nyore kuti usabatanidze chaiwo maficha ekutsigirwa muICloud. Tichakuratidza kuti pazasi sei.
Ini ndinogona kufunga nezve akati wandei zvikonzero nei iwe usiri kuda kutsigira data kubva kune mamwe maapplication. Kuchengeteka ndechimwe chazvo kana iyo kuchengetedza nzvimbo yekuchengetedza pamwe ndicho chikonzero chiri pachena. Saka kuongorora kunyorera kunoenda muICloud backup kunobatsira iwe kuve nekutonga kwakawanda pamusoro pekuwanda kwenzvimbo yekuchengetera inogona kushandiswa, uye kana iwe uri pane 5 GB yemahara chirongwa, ipapo yega yega MB yekushandisa mune yekuchengetedza kuverenga.
Maitiro ekusarudza iwo maficha anogona kuteedzerwa kuICloud.
Nhanho 1: Pane yako iPhone, iPad kana iPod enda Zvirongwa> iCloud> Kuchengeta> Manage chengetedzo.
Nhanho 2: Kana iwe uine akawanda madivaysi eIOS akabatanidzwa kune yako Apple account, iwe uchaunzwa pamwe nemidziyo ine backups yeumwe neumwe wavo. Sarudza negadziriro yeparutivi kuti mudziyo wauri kushandisa parizvino.
Nhanho 3: Zvino iwe uchaona iyo yekuchengetedza ruzivo rwechishandiso chako. Pakati pezvimwe zvinhu, iwe uchaona kuti yekupedzisira backup yakaitwa uye saizi yayo. Kutanga, kunyorera kucharatidzwa, tinya pane "Ratidza zvese zvinoshandiswa”Pasi pechidzitiro.
Nhanho 4: Kubva ipapo, unogona kutanga dzima maapplication ausingade kutsigirwa muICloud. Paunenge iwe kudzima backups emaapplication, iwe unozobvunzwa kuti usimbise kuti iwe unonyatsoda kudzima backups uye kudzima iyo data iyo irimo muICloud.
Ndokumbirawo muone izvozvo maapplication akarongedzwa nekuchengetedza kwakashandiswa, neaya anoshandisa zvakanyanya kuchengetedza pamusoro. iOS inoratidzawo huwandu hwe data iro yega yega app irinotsigira, ichikupa zano rakanaka rekuti ingani nzvimbo yaunogona kuchengetedza.
Kazhinji, the raibhurari yemifananidzo ndeimwe yeanoshandisa izvo zvinonyanya kuchengetedza. Kuremadza yako yekuchengetedza raibhurari yemapikicha inzira iri nyore yekudzosa toni yeICloud nzvimbo yekuchengetera, asi kana ukadaro, yeuka kutsigira mapikicha ako kumwe kunhu, kungave kusevhisi yekuchengetera. Rakasiyana gore chengetedzo, kana pamwe kwanharaunda pakombuta yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » ICloud » Maitiro ekusarudza manyore kuti ndeapi maapplication anogona kutsigirwa kuICloud
Murume anofamba nebakatwa mukati meApple Chitoro